XOG SIR AH:- Shaxda IGAD ee maamul u sameynta gobalada Hiiraan iyo Sh/dhexe – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG SIR AH:- Shaxda IGAD ee maamul u sameynta gobalada Hiiraan iyo Sh/dhexe
Warbaahinta Bulshoweyn ayaa heshay dukumenti sir ah oo ku aadan qorshe hawleedka urur gobaleedka IGAD ee ay ku dhisayaan maamul-gobaleedka Hiiraan iyo Sh/dhexe ee weli la isku mari la’ yahay.
Kadib, markii ay dowladda federaalka Soomaaliya u gudbisay nidaamka maamul-u-samaynta gobalada Hiiraan iyo Sh/dhexe, waxay IGAD bilaabeen inay diirada saaraan sidii ay u sameyn lahaayeen nidaamka u noqonayo maamulka loo dhisayo labadaasi gobal.
Dukumentiga IGAD oo u muuqda mid qabyo ah ayaa waxa lagu soo bandhigay qoddobo badan oo ku aadan awood qeybsiga, caasimadda maamul-gobaleedkaasi, qaabka ay qabaa’iladda degga halkaasi ugu kala tiro badan yahay iyo qoddobo kale.
Dukumentiga ayaa lagu xusay qiimeynta IGAD ee sida ay u kala tiro badan yihiin beelaha Hawiye ee ku nool gobaladda Hiiraan iyo Sh/dhexe, waxayna qiimeyntooda ka dhigeen sidatan:
Beelaha ugu tirada badan gobalka Hiiraan:
Beelaha looga tirada badan yahay gobalka Hiiraan
Beesha Udeejeen 0.5
Faqi Cumar iyo Faqi Muxumad ee Beesha Shiikhaal.
Sidoo kale, shaxda IGAD ee beelaha ku wada nool gobalka Sh/dhexe ayey u kala qeybisay sidatan:-
Beelaha ugu tirada badan gobalka Sh/dhexe:
Beesha looga tiro badan yahay Sh/dhexe:
Waxaa kaloo la sheegay in beesha H/gidir looga tiro badan yahay gobalka Sh/dhexe:
Dukumentiga shaxda sirta ee maamul u sameynta gobalada Hiiraan iyo Sh/dhexe waxaa lagu xusay inay IGAD soo bandhigi doonto awood-qeybsiga maamulkaasi, iyadoo madaxweynaha maamulka cusub loo qoondeeyey mas’uul kasoo jeeda beesha Xawaadle. halka gudoomiyaha baarlamaanka loo magacaabi doono mas’uul ka soo jeeda Beesha Jareer Weyne ama Gugundhabe.
Dhinaca kale, dukumentiga sirta ah oo ku aadan qorshe hawleedka urur-gobaleedka IGAD ku dhisayaan maamul gobaleedka Hiiraan iyo Sh/dhexe waxaa sidoo kale lagu sheegay in beelaha Mudulood iyo Habar gidir aysan mansabka sare ka heli doonin dowlad gobalkedka loo dhisayo Hiiraan iyo Sh/dhexe, maadaama ay beesha Mudulood hayaan xilka madaxweynaha dowladda federalka Soomaaliya, halka beesha Habar-gidirna ay xilka madaxweynenimo ka heleen dowlad gobaleedka Galmudug.
Waxaa kaloo dukumentiga lagu xusay inay koox ka socota IGAD wadatashi la furi doonaan siyaasiyiinta, odayaasha dhaqanka, ururadda bulshadda ee ka soo jeeda Hiiraan iyo Sh/dhexe, si loola wadaago aragtidooda ku aadan dhismaha maamulkaasi.
Dhinaca kale, waxaa kaloo la filayaa in ergooyin ka kala socda labada gobal ka qeyb galaan shir ay IGAD ku qaban doonto Addis Abeba ama Nairobi, si loo soo dhamaystiro dhismaha maamulkaasi.
Waxaa sidoo kale dukumentiga lagu xusay in wejiga labaad ee qorshaha IGAD yahay inay soo bandhigaan dastuurka maamul gobaleedka, caasimadiisa, magaca loo bixinayo maamulkaasi iyo qaabka uu noqonayo calanka maamulka u gaarka noqonayo gobalada Hiiraan iyo Sh/dhexe.
Ugu dambeyntii, shaxda IGAD waxaa kaloo lagu muujiyey in shirweyne lagu qaban doono magaalada B/weyne oo noqon doonto caasimadda maamul gobaleedka Hiiraan iyo Sh/dhexe.
Si kastaba ha ahaatee, dukumentigaasi sirta ah islamarkaana ka kooban ilaa 23 bog ayaa waxaa e-mail ahaan isku isku dhaafsaday madax ka tirsan IGAD, waxayna shaxda u muuqataa mid sii kala fogeyn kara dadka walaalaha ee ku nool gobaladda Hiiraan iyo Sh/dhexe.